Gabadha Haddii Ay Leedahay Afartaan Calaamadood, Waligaa Ha Iska Sii Deyn - Aayaha
Gabadha Haddii Ay Leedahay Afartaan Calaamadood, Waligaa Ha Iska Sii Deyn
Aayaha editorDecember 1, 2018
Haweenka waxay noqon karaan ilaha farxadda ee nolosha ninka balse waxay sidoo kale noqon karaan jabkooda
Haddeey gabadha leedahay afartaan sifood, marnaba ha iska sii deyn.
1. kuma eedeyso/ kuma dhaleeceyso
Sida ragga, ayay haweenkana u noqon karaan kuwo eedeyn badan. Haweeneyda wanaagsan marnaba ma dhaleeceyso seygeeda. Dhaleeceynta waxay qofka ka dhigtaa mid daciif ah oo liita marka seygaaga ka ilaali dhaleeceynta.
2. Gacan ayay ku siisaa
Helitaanka adag ma sahlana. Haddii aad la haasaawdid gabar adag, waxaa hubaal ah inay ku caawin doonto. Haweeneyda wanaagsan way ogtahay faa’dada ay leedahay inay taageerto seygeeda. Wax kasta oo suurtagal ah ayay sameyneysaa si ay kaaga caawiso inaad guulahaaga ka miro dhaliso.
3. Waxay kuugu baaqdaa inaad ka dhabeysid riyooyinkaaga
Qof kasta waxa uu leeyahay riyooyin iyo hammi uu rajeeyo inuu gaaro. Haweeneyda wanaagsan waxay kugu dhiiri gelin doontaa inaad dabagasho riyooyinkaaga. Way ku taageeree, iyadoo horey kuugu riixeysa inaad si adag u shaqeyso illaa riyooyinkaaga ay ka noqdaan kuwo rumoobo.
4. Way faraxdaa markaad guriga dib ugu laabato
Sidee u dhaqantaa lamaantaada markaad guriga tagto? Haweeneyda wnaaagsan way ku farxee inay aragto seygeeda kadib maalin dheer oo shaqo uu ku jiray kadib. Ma qarin karto dareenkeeda iyo sida ay kuugu faraxdo. Haddii aad si wacan kuugu soo dhoweyso hooyga isla markaana rabto inay waqti kula qaadato markaas, waligaa ha iska sii deyn gabadhaas.
Laba nooc oo haweenka kamid ah iska ilaali haddii aad raadineysid xaas
Sameey shantaan waxyaabood, Haddii aad dooneysid inaad gabar kasta soo jiidato
Xooji Jacaylka Ay Kuu Qabto Xaaskaaga Adigoo Sameynaya Afartaan Waxyaabood Kaliya